Ogoow dheelitirkaaga faa'idada cuntada ee WIC ka hor inta aadan dukaanka tagin.
Iibso oo kaliya waxaad ubaahantahay. Khasab kuguma aha inaad iibsato dhammaan cuntooyinkaaga hal mar!
Isticmaal barnaamijka WICShopper inta aad dukaameysid si aad u hubiso in alaabta WIC ay kuu ogolaatay.
Baadhitaanku wuu ku kala duwanaan karaa dukaanka, laakiin dukaamada intooda ugu badan dukaanka ayaa baari doona raashinkaaga kadibna waxaad ku dhejin kartaa kaarkaaga eWIC.
Rasiid dhexe ayaa daabacan doonta ka dib markaad turubto kaarkaaga oo aad geliso lambarkaaga PIN. Si taxaddar leh dib ugu eeg risiidhka ka hor intaadan "haa" ku xulan santuuqa PIN. Rasiidkan wuxuu muujinayaa waxyaabaha ay dabooli doonto WIC.
Xasuuso inaad isticmaasho kaarkaaga eWIC marka hore, kahor SNAP, amaah / lacag ama lacag caddaan ah.
Dhamaan wixii baaqi ah oo dheellitiran waxaa la siin karaa SNAP, amaah / lacag ama lacag caddaan ah.
Khasnajigu wuxuu ku siin doonaa risiid kama dambeys ah oo laguugu xisaabi doono inta ka dhiman WIC iyo taariikhda dhicitaanka.
Ku saabsan PIN
Si aad u bedesho lambarkaaga PIN, wac 1-844-892-2934.
HA YEELIN isku day inaad qiyaasto lambarkaaga PIN. Haddii PIN-ka saxda ah aan la gelin isku day saddexaad, koontadaada waa la xirayaa. Haddii laba isku day ka dib, waxaa fiican inaad bedesho lambarkaaga PIN halkii aad ka xiri lahayd koontadaada.